Shacabka Muqdisho Ciidan Ma Dareemin Farxada Ciidul Fitriga + (Sababta) – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Shacabka Muqdisho Ciidan Ma Dareemin Farxada Ciidul Fitriga + (Sababta)
Carruurta Muqdisho ayaa ciidan u ahayd mid aysan ka muuqan farxad iyo fantasiyo ay ku muujinayaan dareen farxadeed oo ay ciida ugu dabaaldagayaan maadama aanaan jirin gaadiid ka shaqeynaya dagmooyinka gobalka, sido kale majirin gadiid isaga kala gooshayay wadooyinka Muqdisho.
Madaxda ugu sareysa dalka oo khudbado jeediyay ayaa aad ubogaadiyay ciidamada xasilinta ee ka howlgala caasimada waxayna ku tilmaameen geeesiyaas qabtay howl heer qaran ah oo u baahan in la bogaadiyo, maadaama ay xireen wadooyinka hal bowlaha u ah isku socodka dadka iyo gadiidka.
Wasaarada amniga Soomaaliya ayaa soo bandhigtay sido kale agabka caruurta ay ku xiyaaraan sida bastooladaha caaga iyo kuwa kale ee dhawaqa sameeya, waxeyna ku sheegtay wasaarada iney wadi doonaan ka qaadista caruurta agabkaasi lagu ciyaaro ciida.
Ra,isalwasasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cli Kheyre ayaa shacabka reer Muqdisho ka raali galiyay xirnaashaha Wadooyinka Magaalada.
Ciidamada xasilinta ayaa feejignaan weyn la geliyay iyadoo wadooyinka waaweyn ee magaalada la xirey maalmihii ugu dambeeyay ee bishii Ramadaan ee dhamaatay waxaana xusid mudan in 29 kii maalmood ee Bishii Ramadaan aysan Xamar ka dhicin wax qaraxyo ah iyadoo sanadihii u dambeeyay ee Ramadaanka ay magaalada ka dhici jireen qaraxyo.